भगवान विष्णुको चक्रको उत्पत्ति कसरी भयो ? रहस्यमा रहेको तथ्य जन्नुहोस ! – Jagaran Nepal
भगवान विष्णुको चक्रको उत्पत्ति कसरी भयो ? रहस्यमा रहेको तथ्य जन्नुहोस !
एक पटक नारायण अर्थात् भगवान विष्णुले आफ्नो इष्ट देवीको देव महादेवलाई प्रसन्न गर्न एक हजार कमलको फुल चढाउने सोच बनाए । पुजाको सारा सामाग्री जम्मा गरेपछि उनले आफ्नो आसन ग्रहण गरे, आँखा बन्द गरेर संकल्पलाई दोहो¥र्याई अनुष्ठान शुरु गरे । वास्तवमा शिवजी इष्टका नारायण हुन् र नारायणको इष्ट शिवजी हुन् ।
आज भगवान शंकर भगवानको भुमिकामा थिए, र भगवान नारायण भक्त थिए । भगवान शिवले शंकरलाई एउटा ठट्यौली गरे । उनले चुपचाप सहस्र कमलोबाट कमल चारे । नारायण आफ्नो इष्टको भक्तिमा लेन थिए । उनलाई यसको बारेमा केही थाहा थिएन् । जब नारायणले नौ सय उनानसय कमल चढाएपछि एक हजार कमल चढाउनको लागि थालमा हात राख्दा कमलको फुल त्यहाँ थिएन् ।